About Us - Shandong Hengyi Xoolaha Co., Ltd.
Shandong Hengyi Xoolaha Makiinado CO., LTD. waxa uu ku yaalaa Longkou, magaalo qurux badan xeebteeda in Yantai, Gobolka Shandong, taas oo uu leeyahay gaadiid ku haboon, bari ee Yantai, Qingdao koonfureed, u dhow dekedda West Longkou, Dalian dhinaca waqooyi oo badda. waa hay'adaha warshadaha farsamada oo isku daraa cilmi, soo saaridda iyo promotion.It soo saarta alaabta birta ah sida baqashada digaag, qalabka doofaarka korinta, xoolaha mishiino xannaanada, oo shabagyadoodii kaydinta hawada qabow iyo wixii la mid ah, kuwaas oo heer sare ah ku amaanay by users.
Si ku habboon baahida loo qabo horumarinta xannaanada xoolaha, set oo ah qalab farsamo si toos ah soo saaray by our warshad ogaaday gacanta si toos ah nidaamka quudinta, nidaamka hawo, nidaamka biyaha la cabo, nidaamka digo iyo leedahay sifooyinka of dhismeedka macquul ah, waxqabadka deggan oo xoog badan cimri dherer.
The mashiinada xannaanada xoolaha ee our warshad damaanad qaadi karno nolosha adeeg ee shan iyo toban years.In isticmaalka beeraha waaweyn ee dunida ka, our qalabka ayaa gaarey natiijooyin wanaagsan. Waxaan had iyo jeer u hoggaansamaan falsafada ganacsiga ee "tayo leh sida badbaadada, sumcad u tahay horumarka, midnimada iyo horumarka, hal-abuurnimo oo joogto ah" ayuu
Our warshad mar walba qaadataa qancinta macaamiisha sida ay mas'uuliyadda, la our sharafta, waxyaabaha fiican iyo adeegga aad u fiican si aad u dhiso buundo si ay u bixiyaan in labada macaamiisha cusub iyo wax duug ah adeegga ugu wanaagsan. macaamiisha Welcome inuu yimaado tashadaan si ay, waxaan noqon lahaa ku faraxsanahay inaan ku siiyo adeeg lagu qanci karo.